Itoobiya oo saddex sano kadib shidaal dhoofineysa - Worldnews.com
ADDIS ABABA - Wasaaradda Macdinta, Shidaalka iyo Saliidda Dabiiciga ee Itoobiya ayaa sheegtay Soo saarista Shidaalka Deegaanka Soomaalida laga helay in lagu soo gabagabeeynaya saddex sano.
Agaasinka waaxda maamulka shatiyada shidaalka ee wasaaradda Qasala Tadese ayaa sheegtay iney jiraan marxalado dhowr ah oo ka
"in la qodayo boqollaal ceel oo kale isla-markaana la fulinayo mashaariic waaweyn oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo fududeynayo shidaalka in muddada looga tala galay dalku uu ku soo saaro."
Wasaaradda Macdinta, Shidaalka iyo Saliidda Dabiiciga ee Itoobiya ayaa sheegtay Soo saarista Shidaalka Deegaanka Soomaalida laga helay in lagu soo gabagabeeynaya saddex...
Wafti uu hoggaaminaya guddoomiyaha ururka ONLF ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaas oo si diirran loogu soo dhaweeyay. Subaxnimadii saaka ayay...
Xogo Cusub Oo Laga Helay Shidaalka Somaliland Iyo Soomaaliya Iyo Baadhitaano Lagu Ogaaday Lix Goobood ...
Hargeysa (Ilays-News):- Khubaro Daraasaysa cilmiga Jiyoolajiga gaar ahaan khayraadka shidaalka ayaa waxa ay sheegeen in guud ahaan wixii hore la isugu odhan jiray...
Qaran News 2018-12-06
Sidee shacabka Jigjiga u arkaan soo laabashada ONLF? [WAREYSI]
JIGJIGA - Waxaa magaalada Jigjiga shalay ku laabtey wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha ONLF, Admiral Maxamed Cumar Cismaan, kaasi oo ay wehliyaan mas'uuliyiin sare oo...
Gareowe Online 2018-12-03
JIGJIGA, Itoobiya - Wafdi balaaran oo ka socda Jabhadda ONLF ayaa dib ugu laabtay wadanka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa, xili ay la kulmeen soo dhaweyn aad u...
Gareowe Online 2018-12-01
Xilli magaalada Jigjiga ay tageen saraakiisha jabhadda ONLF ee muddada u dagaalamaysay sidii isbedel uu uga dhici lahaa Dowlad Deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa dad...
Xilli magaalada Jigjiga ay tageen saraakiisha jabhadda ONLF ee muddada u dagaalamaysay sidii isbedel uu uga dhici lahaa Dowlad Deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa dad badani waxay isweydiinayaan waxa xiga, madaama ONLF ay iminka u muuqato in ay saameyn ku yeelan doonto arrimaha Dowlad Deegaanka, dad badan oo lagu tuhmayo in ay dhibaato geysteenna ay wali ku sugan yihiin...
ADDIS ABABA - Wafdi 20-xubnood ka kooban oo ka socda hogaanka sare ee Jabhadda ONLF ayaa sabtida soo socota, 1-da December ku wajahan dalka Itoobiya. Waxaa ku jira xubnaha gudoomiyaha ONLF, Maxamed Cumar, sida uu sheegay Afhayeenka ONLF. Tani ayaa kusoo beegmaysa xilli todobaadkii tagey ay ciidamada ONLF ay ku laabteen Jigjiga, iyagoo kasoo guurey xeryahooda Eritrea, kadib...
Magaalada Jigjiga ee xarunta Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxaa maalin ka hor si weyn loogu soo dhoweeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa jabhadda ONLF. Imaanshaha mas'uuliyiinta ONLF ayaa ka dambeesay, kadib markii dhawaan ay heshiis nabadeed la saxiixdeen dowladda Itoobiya. Sannadkii 1990 ayay aheyd markii dowladdii Itoobiya ee uu hogaaminayay Meles Zenawi ay...
Hogaamiyaha jabhadda ONLF Maxamed Cumar Cismaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan jabhadda ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga oo uu markiisii ugu horreysay gaaray, wuxuuna sheegay iney sii wadi doonaan howlohooda ku saabsan xorriyadda, mideynta iyo horumarinta shacabka. Mas'uuliyiintan ayaa shalay ka degay magaalo madaxda Itoobiya ee Addis Ababa,...
Wajiga Cusub ee Siyaasadda Arrimaha Dibadda Maraykanka iyo Isbadalada Ka Socda Gobolka Maxaa Fursado ugu ...
Wajiga Cusub ee Siyaasadda Arrimaha Dibadda Maraykanka iyo Isbadalada Ka Socda Gobolka Maxaa Fursado ugu Jira Somaliland? Qore: Abdinasir Ibrahim Saacadaale 12/12/2018 Haatan ka hor, istiraatijiyadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraynkanka ee ku wajahan dunida inteeda kale, gaar ahaan dunida saddexaad waxa ay ahayd mid ay xuddun xoog u ahayd arrimaha ay ugu waaweynyihiin la...